Mwari Ane Basa Here Muupenyu Hwedu? Nei Pachimuka Mubvunzo Uyu?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | MWARI ANOKOSHA HERE MUUPENYU HWEDU?
Nei Pachimuka Mubvunzo Uyu?
“Uri mumwe wevaya vasingatendi kuti kuna Mwari here? Kune mamiriyoni akaita sewe.” Mashoko aya aiva pachikwangwani chakaiswa munguva pfupi ichangopfuura nerimwe boka revanhu vasingatendi kuti kuna Mwari. Zviri pachena kuti vanoona sokuti Mwari haana basa muupenyu hwavo.
Ukuwo pavanhu vanoti vanotenda muna Mwari, vakawanda vacho havatombofungi nezvake pavanosarudza zvokuita muupenyu hwavo. Mumwe mukuru wemabhishopu echechi yeRoma anonzi Salvatore Fisichella akataura nezvevanhu vomuchechi yake achiti: “Pari zvino hapana kana angamboziva kuti tiri vaKristu, nokuti mararamiro edu akangofanana neevanhu vasingatendi.”
Vamwe vane zvakawanda zvokuita zvokuti havatombofungi nezvaMwari. Vanoona sokuti hazviiti kuti Mwari ave pedyo navo kana kuti haana kana chine musoro chaangaita muupenyu hwavo. Vangatofunga nezvaMwari chete kana vaine dambudziko kana kuti vachida chimwe chinhu, zvichiita sokuti Mwari muranda wavo anongofanira kuita zvavanenge vachida.
Vamwe havararami maererano nezvinodzidziswa muzvitendero zvavo, pamwe nemhaka yokuti vanoona sezvisingabatsiri. Somuenzaniso, vanhu vechechi yeRoma vanosvika 76 muzana (76%) vokuGermany vanotenda kuti hazvina kuipa kuti murume nemukadzi vagare pamwe chete vasina kuroorana, anova maonero anopesana nezvinodzidziswa nechechi yavo uye neBhaibheri. (1 VaKorinde 6:18; VaHebheru 13:4) Ichokwadi kuti chechi yeRoma haisi yoga ine vanhu vanorarama zvinopesana nezvavanodzidzisa. Vafundisi vezvitendero zvakawanda vanochema-chemawo kuti vanhu vezvitendero zvavo vanorarama sezvinoita “vasingatendi kuti kuna Mwari.”
Zvose izvi zvinoita kuti tive nemubvunzo wokuti: Mwari ane basa here muupenyu hwedu? Nyaya iyi haisi itsva. Yakatanga kutaurwa nezvayo mumapeji okutanga eBhaibheri. Kuti tiwane mhinduro, ngatimboongororai nyaya dzakamutswa dziri mubhuku reBhaibheri raGenesisi.
Mwari Anokosha Here Muupenyu Hwedu? Nei Pachimuka Mubvunzo Uyu?
December 2013 | Mwari Anokosha Here Muupenyu Hwedu?
NHARIREYOMURINDI December 2013 | Mwari Anokosha Here Muupenyu Hwedu?